Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စစ်တွေမြို့တွင် ဇွန်လ ၁၇ရက်နေ့က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့၏ပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်ဦး၊ရခိုင်လူမျိုးတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့
စစ်တွေမြို့တွင် ဇွန်လ ၁၇ရက်နေ့က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့၏ပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်ဦး၊ရခိုင်လူမျိုးတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့
စစ်တွေမြို့တွင် ဇွန်လ ၁၇ရက်နေ့က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့၏ပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်ဦး၊ရခိုင်လူမျိုးတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း7Day News သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။ ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည့် ည၇နာရီအချိန်တွင် လုံခြုံရေးအဖွဲ့က မသင်္ကာဖွယ်ရာလူတစ်စုကိုတွေ့ရှိသဖြင့်လူစုခွဲရန်ပြောရာလူစုခွဲခြင်းမရှိသည့်အ တွက် ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်သော်လည်း လူစုကွဲသွားခြင်းမရှိသဖြင့် ထပ်မံပစ်ခတ်ရာ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်ဦဒသေဆုံးခဲ့သည်။အလားတူ ဇွန်လ ၁၇ရက်နေ့လည်၂နာရီခန့်တွင် မသင်္ကာဖွယ်လူ၂၀ခန့်က နာဇီရပ်ကွက်သို့ ၀င်ရောက်မီးရှို့ရန်သွားရောက်နေသည်ဟုယူဆရသည့်အတွက် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းကခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်ရာပစ်ခတ်ရာ ၁၇နှစ်အရွယ် ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၇ဦးကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်း အမှတ်၁ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးကအတည်ပြုပြောကြားသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 23:17
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စစ်တွေမြို့တွင် ဇွန်လ ၁၇ရက်နေ့က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့၏ပစ်ခတ်မှု့ကြောင့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်ဦး၊ရခိုင်လူမျိုးတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ . All Rights Reserved